Akaiky kokoa an'i Jesôsy
“Ka dia maneke an’Andriamanitra hianareo; ary manohera ny devoly, dia handositra anareo izy. Manatona an’Andriamanitra, dia hanatona anareo Izy. Diovy ny tànananreo , ry mpanota; ary ataovy madio ny fonareo, ry mpiroa saina” Jak. 4:7,8
Rehefa manampoka antsika ny fakam-panahy, dia mila fahaiza-manavaka ny ara-panahy isika, hahafantarantsika ny tetik’i Satana, ka hanakaikezantsika an’i Jesôsy. Manatona an’Andriamanitra dia hanatona anao Izy, manohera ny devoly dia handositra anao izy. Ilaina ny miady ny ady tsaran’ny finoana mandritra ny fotoana rehetra, satria tsy maintsy toherina ny fisalasalana, ary ampirisihina ny finoana. Rehef misy ny fakam-panahy dia tokony hofoanan’ny fahendrena ny fironana. Hitady indrafo ny tena, nefa tsy maintsy resena ny fakam-panahy.
Nanome fampitandremana Andriamanitra, efa nanome fistipipitondran-tena hotandrema’ny kristianina tsirairay Izy, hampiarin’izy ireo amin’ny fiainany. Ireo izay manohy tsy mijery ny fahazavana sy ny fampitandremana nomen’Andriamanitra dia hanjary mpizahozaho hatrany ary hahatsiaro ho mahavita tena. Ireo izay tsy miankina amin’Andriamanitra dia azo antoka fa ho lavon’ilay fahavalo. Mampiasa ny fomba azo sainina rehetra i Satana hahatonga ho eo amin’ny laharany ireo izay milaza ho miandany amin’Andriamanitra. Azony atao ny manajamba ny mason’izy ireo mandra-piantson’izy ireo ny mazava ho maizina, ary ny maizina ho mazava.
Na dia mamiratra amin’ny taratra mazava kokoa noho ny teo aloha aza ny fahazavan’Andriamanitra, ary mbola hihamazava kokoa izany satria efa akaiky ny fiafaran’ny tanataran’ny tany, dia ireo olona mampilefitra ny lohaliny hitady ny fahendren’Andriamanitra ihany no hahay hanavaka ny marina amin’ny diso. Ny taratra mazavan’Ilay Masoandron’ny fahamarinana ihany no hampiharihary ny teti-dratsy maro samy hafa ataon’ilay fahavalo. Miasa hamitaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra ilay ratsy; ka raha tsy mibanjina ny herin’ny maizina isika, dia tokony hahafantatra ireny fomba fiady ireny.
I Jesôsy Kristy no tokony ho ivon’ny finoanatsika. Rehefa mijery Azy isika, rehefa mifikitra amin’ny heriny izay ampy ho an’ny fahamehana rehetra, dia hikambana amin’ny Azy ny fontsika, ny fiainantsika ho tafaray amin’ny Azy amin’ny alalan’ny fatorana voaafina, ary satria velona Izy dia ho velona ihany koa isika. Izany no fanompoam-pivavahana tanteraka, fa tokony hazonin’ny herin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny finoana ho amin’ny famonjena isika. Tsy misy na dia iray aza amintsika ho voaaro raha tsy manatona an’Andriamanitra amin’ny fanekeny mandrakizay, izay tsy tokony hohadinointsika. RH, 14 Martsa 1893.